Calaamada 3 ee Ibraahim: Allabari - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Nebigii weynaa, Ibraahim (NNKH) ayaa loogu ballan qaaday wiil Calaamadihii hore. Sidoo kale Ilaah baa dhawray inuu ballankiisii fuliyay. Dhab ahaantii Towreedku waxa uu sii waday qisooyinkii Ibraahim (NNKH) si ay u sharxaan sida uu laba wiil ku helay, in Bilowgii 16 Tawreedka ayaa inoo sheegayaa sidee buu wiilkiisa Ismaaciil ku helay, kulana Xagar iyo kadib Bilowgii 21 sheegayaa sida uu wiilkiisii Isxaaq uu ku helay kulana Saarah oo muddo garaysa 14 sano ka dib. Nasiibdarro aqalkiisa khaas ahaan, tannina waxay keentay in tartan u dhexeeyay labada haweenka ah, Xagar iyo Saarah, iyadoo ku dhamaatay in Ibraahim uu diray Xagar iyo wiilkeeda meel shishe. Waxa aad ka akhrin kartaa halkan sida tanni u dhacday iyo sida Ilaah ugu barakeeyey Xagar iyo Ismaaciil habab kale.
Allabariga Nebi Ibraahim: Aasaaska Ciidul Adxa (Eid al-adha)
Sidaas aawadeed hal wiil oo keliya ayaa ku hadhay gurigiisa Ibraahim (NNKH) waxaa soo foodsaaray kulan tijaabo u ahaa laakiin waa mid innoo furaysa isfahamkii weynaa ee Jidka Toosan. Fadlan akhri qisooyinkii ka yimid Tawreed iyo Quraanka kuna saabsanaa imtixaanka allabariga ee wiilkiisa halkan. Sheekadan ka timid Kutubta waa sababta loo xusaa Ciidul Adxa. Laakiin tani ma’ahan oo kaliya dhacdo taariikhi ah. Waa mid dheeraad ah.
Waxaan ka arki karnaa qisooyinka ku suganyahay Kutubta in tani ay tahay tijaabo loogu talagalay Ibrahim (NNKH), laakiin waa in ka badan intaas oo kaliya. Maadaama uu yahay nebi imtixaamkanina sidoo kale waa calaamad innaga laynoogu talagalay, si aan u barano wax badan oo ku saabsan daryeelka Ilaah ee uu inoo hayo. Sidee bay tani inoogu tahay Calaamad? Fadlan fiiro gaar ah u lahoow magaca uu Ibraahim siiyay meesha halkii wiilkiisa lagu gowraci lahaa. Tani waa qayb ka mid ah Tawreedka waxaa halkan ku cad si aad u akhrin kartaan si toos ah.
Markaasaa Ibraahim indhihiisii kor u taagay, oo wax fiiriyey, oo wuxuu dabadiisa ku arkay wan geesaha kayn kula jira. Markaasaa Ibraahim tegey oo wankii soo kaxeeyey, oo wuxuu u bixiyey allabari guban meeshii wiilkiisa. Ibraahimna meeshaas wuxuu u bixiyey Yehowah Yireh; xataa ilaa maanta waxaa la yidhaahdaa, Buurta Rabbiga ayaa lagu arki doonaa.
Sidaas aawadeed Ilaah baa siiyey wan si aan wiilkiisa loo gowricin. Laakiin bal arag magaca Ibraahim siiyey meeshaas. Magiciisiina wuxuu u bixiyey ‘Rabbigu wuxuu ku siin doonaa’. Magacaasi ma ficil la soo dhaafay baa, mid jooga miyaa ama mid soo socda oo aan la gaarin? Waxaa si cad ugu sugan waqti mustaqbalka ah. Oo xitaa si cad u cadeeynaysa oo celisna u ah soona socota “… Waxaa la siin doonaa”. Mar kale tani waa fal mustaqbaleed iyadoo sii eegaysa waxa soo socda – mustaqbalka. Dadka intooda badan waxay qabaan in Ibraahim uu tilmaamayay wankii oo laga soo qabtay kaynta loogu allabariyay meeshii wiilkiisa. Laakiin marka Ibraahim magacaabo meesha wanku horeba waa u dhintay, allabariyay oo la gubay. Haddii uu Ibraahim ku fikirayo wanka – horeba u dhintay, loo allabariyay oo la gubay – waxaa uu ugu yeedhi lahaa ‘Rabbigu wuu ku siiyay‘, taas micnaheedu waxa weeye ficil la soo dhaafay. Oo warbixintu waxay akhriyi lahayd ‘Oo ilaa maantadan la joogo waxaa la yidhaahdaa buurta Rabbiga loo bixiyay’. Laakiin Ibraahim si toos ah ayuu magac u siiyay fal mustaqabal soo socda leh oo sidaas daraadeed ma uusan ku fikirayn wankii horeba u dhintay oo lagu allabariyay.
Sidaas aawadeed muxuu ku fikirayay oo ku saabsanayd ka dibna? Haddii aan baadigoobno wax fikrad siin ah waxaan arki in meesha ay ahayd halkii uu Ilaah ugu sheegay Ibraahim in uu aado markii ugu horaysay ee caalamadan ay ahayd:
Kadib Ilaah baa ku yidhi,”Markaasuu ku yidhi, hadda kaxee wiilkaaga keligiis ah, kan aad jeceshahay, oo ah Isxaaq, oo u kac dalka Moriyaah; oo halkaas isaga sida allabari la gubo ku dul bixi buuraha middood oo aan kuu sheegi doono” (v.2)
Tani waxay ka dhacay ‘Moriyaah‘. Oo waa meeshee halkaasi? Inkastoo ay ahayd meel cidla ah wakhtigii Ibraahim ee (2000BC), kun sano ka dib (1000 BC) Boqorkii caanka ahaa ee Dawood (David) ayaa ka aasaasay magaalada Yeruusaalem, iyo wiilkiisii Suleiman (Sulaymaan) halkaas ka dhisay meel macbudka ah. Waxaan ka akhrinay Kitaabka Quduuska ah oo arrintan ku saabsan:
Markaasaa Sulaymaan bilaabay inuu gurigii Rabbiga Yeruusaalem ka dhiso oo ka dul dhiso Buur Moriyaah oo ahayd meeshii Rabbigu ugu muuqday aabbihiis Daa’uud
Taariikhdii Labaad 3:1
In si kale loo dhigo, ‘Buurta Moriyaah’ wakhtigii Ibraahim (Oo ka dib Muuse) waxay ahayd buur sarre oo go’doon cidla ah laakiin 1000 sano ka dib Dawood iyo Suleiman waxay noqotay Yeruusaalem (al Quds), bartamaha iyo caasimadda reer binu Israa’iil, halkaas oo ay ka dhiseen macbuudka ILAAH. Oo ilaa maantadan la joogo waxay u tahay meel quduus ah dadka Yuhuudda.
Buurta Moriyaah ayuu Rabbigu doortay, ee Nabi Ibrahiim go’aanka iskamu lahayn Suurat Al-Jinn (Surah 72 – Jiiniga) waxay sharaxaysa:
Masaajidda Eebaa iska leh ee ha kula baryina «caabudina» Eeb Cid kale.
Surah al-Jinn 72:18
Rabbiga ayaa doorta goobaha lagu cibaadaysto. Waxaynu is weydina maxa loo doortay meelaha cibaadada.
Ciise Masiix iyo Allabariga lagu sameeyay Buurta Moriyaah
Oo halkan waxaan ka heli doonaa si toos ah xiriirka u dhexeeyaa dhicidaan ee allibariga Ibraahiim, iyo Ciise Masiix (NNKH) iyo Injiilka. Waxaan aragnaa xiriirkan marka aan og nahay magaca ku saabsan Ciise. Ciise waxa uu lahaa magacyo badan oo isaga la siiyey. Dabcan kan aadka loogu yaqaanay waa ‘Masiix’ (taasoo sidoo kale loo yaqaan ‘Masiixa’). Laakiin waxaa jira magac kale oo la siiyey isaga kaasoo ah mid aad muhiim u ah. Waxa kan waxaynu ku aragnaa Injiilka markii nebi Yaxya (Yooxanaa Baabtiisaha uu Injiil) ku yiri:
Maalintii labaad Yooxanaa wuxuu (Yaxya) arkay Ciise (Ciise) soo socda isaga xaggiisa ku arkay oo wuxuu ku yidhi, Maalintii labaad Yooxanaa wuxuu arkay Ciise oo ku soo socda, oo wuxuu yidhi, Bal eega Wanka Ilaah ee dembiga dunida qaadaya. 30 Kanu waa kii aan idhi, Waxaa iga daba imanaya nin iga horreeyey, waayo, hortay buu jiray.
Yooxanaa 1: 29-30
Muhiim ah, laakiin midka aan sidaas loo aqoon magacaasi ee Ciise (NNKH), uu siiyey Yaxye wuxuu ahaa ‘Wanka Ilaah”. Haddaba ka fiirsada dhamaadka nolosha Ciise. Halkii lagu xidhay oo lagu xukumay dilka? Waxay ahayd Yeruusaalem (Taasoo sida aan ku aragnay waa isku mid sida ‘Buurta Moriyaah’). Waxaa aad u cad in la sheegay markii la xidhayey in:
Goortuu (Bilaatos) ogaaday inuu (Ciise) ka mid ahaa kuwii Herodos xukumo, wuxuu u diray Herodos, kan qudhiisu Yeruusaalem joogay ayaa ka dhacday Yeruusaalem (= Buurta Moriyaah).
Dib ugu noqo Ibraahim. Muxuu uu ugu magacaabay meeshaas ficil mustaqbaleed ‘ILAAH wuxuu ku siin doonaa? Wuxuu ahaa nebi iyo isagoo ogaa in wax lagu ‘sii doono’ halkaas. Wakhtigii imtixaankaas, wiilka Ibraahim waa laga badbaadin doono dhimasho marka ugu dambaysa maxaa yeelay wanka ayaa u dhintay halkiisii. Laba kun oo sano ka dib, Ciise waxaa loogu yeedhay ‘Wanka Ilaah’ waana la xiray oo lagu xukumay dil isla goobtii!
Allabarigii ka madax furay Ibraahim Dhimashada
Kanu muhiimad manoogu jiraa? Waxaan xusay sida calaamada Ibraahim ay ku dhamaanayso. Aayada 107 Quraanku uu leeyahay in Ibrahim (NNKH)
‘Oo waxaana u soo furtay allabari ku weyn’
Maxay ka dhigan tahay in la ‘furtay’? Si aad u bixisaan madax furasho waa in lacag la siiyo qof kuwaasoo loo haysto maxbuus sidaasoo maxbuuska lagu sii dayn karo xabsiga. In uu noqdo mid la ‘furtay’ waxaa loola jeedaa in uu ahaa maxbuus uun (Haa, xataa Nebi weyn!). Maxay ahayd wuxuu maxbuus u ahaa? Allabariga wiilkiisa uu inoo sheegayaa. Wuxuu ahaa maxbuus dhimasho. Inkasta oo uu ahaa nin nebi ah, dhimashada ayaa u haystay maxbuus. Waxaan ka aragnay calaamada Aadan in Ilaah sameeyey Aadan iyo Caruurtiisa (qof kasta – oo ay ku jiraan nebiyada ahaa) dhimanayaan – oo ay haatan ahaayeen maxaabiista dhimashada. Laakiin wanka loogu allabariyay awgiis, Ibrahim (NNKH) waa lagu ‘furtay’ kan. Haddii aad dib u eegto taxanaha ka mid ah Calaamooyinka (Aadan, Qaabiil & Haabiil, Nuux, Ibraahim 1) hadda waxaad arki doontaa in allabariga xoolaha waxaa had iyo jeer ku dhaqma nebiyada. Waxay ogaayeen wax arrintan ku saabsan in laga yaabaa aan illownay. Oo waxaan arki karnaa maxaa yeelay falkan ayaa sidoo kale tilmaamay oo jiheeyay mustaqbalka; Ciise Masiix ‘Wanka Ilaah’ uu yahay, oo wax ku saabsan allabarigan.
Allabariga: Naloo barakeeyay
Oo allabarigii wanka Buurta Moriyaah waxay inoo leedahay muhiimad. Dhamaadka imtixaanka Ilaah waxay u sheegtay in Ibraahim
“…oo ay quruumaha dunida oo dhammu ku barakoobi doonaan farcankaaga, maxaa yeelay, codkaygaad addeecday
Haddii aad ka tirsan tahay mid ka mid ah ‘quruumaha dhulka'(Oo aad adigu aad ku tirsan tahay!) waxaad leedahay xiiso weyn ballankan maxaa yeelay ballankan waxaa leh ka dibna in aad Ilaah isaga qudhiisu ka heli kartaa ‘barako’! Ma in aan qiimo lahayn baa?! Sidee bay xiriirka sheekada Ibraahim iyo Ciise ay innooga dhigi karaan mid barako inoogu jirta? Oo waa maxay sababtu?
Waxaan la soconaa in Ibraahim (NNKH) la ‘furtay’ iyo iyadoo tani laga yaabaa in wax fikrad ah ay naga siiso, laakiin xiriirka furista Ibraahim iyo barakadeenna si fudud lama arkin. Haddaba aan u sii wadi doonaa calaamaadka Muuse oo ay noo caddayn doonaa su’aalahani.
Laakiin halkan waxaan rabaa in aan tilmaamo ereyga ‘Farcankaaga’ halkan waa mid keli ah. Ma’ahan ‘faracyadii’ sida in faracoodii badnaa ama dadyowga. Ballanqaadkii barakaynta ahaa iyada oo ah ‘farcankiisa’ ka yimid Ibraahim ee keli ahaaneed – Keli sida in ‘ayuu’, ma ay dad badan oo ama koox dad ah sida in ‘ay’. Calaamadii Kormaridda ee Muuse hadda naga caawin doonaan si aan u sii fahano.
Tags:allabari xoolaha IslaamigaCiidul AdxaEidIbraahim oo TawreedaIbraahim Tawreedina Ibrahim kitaabkii almacnaha Ciidul AdxaMuslimiinta allabari xoolahaNebi Ibraahim ee Kitaabka Quduuska ahNebi Ibraahim oo TawreedaSurah al-Jinnxoolaha allabari Islaamiga